Bungtla waterfall - Chin Directory
Visited 629 times,3Visits today
Matupi, Chin state
Home » » Listing » Destinations » Bungtla waterfall
The Bungtla waterfall is in Panai village, Matupi town, Chin State. The waterfall is seven stages in the north, near the town of Htet Seng Village and its height is 4200 feet. The top three levels are visible fromadistance and the water level is 30 to 40 feet at the highest level.
It is about5miles from Matupi to Phinei and from Phinei to Thisong is about 11 miles. After eight miles from Phi Naing village, we had to cross the plain of the Talae River twice, reaching the plains. There isapower plant between the two river crossings. After crossing the second stream and climbing about3miles one will arrive at Thisong village. From Bungtla to Thisong is about three miles. A car can reach up to one mile from Thisong and then one has to walk another one mile to get to the waterfall.
Bungtla is the name called by local of Matupi. Bung means falling and tla means down which in all mean falling down. Fall It can be interpreted asafall. Ethnic minorities live in the Thang Sai village near the Botatha Falls.
ဘုံတလာရေတံခွန်သည် ချင်းပြည်နယ်၊ မတူပီမြို့၊ ဖနိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ထီစောင်းရွာအနီးမြောက်ဘက်အရပ် တွင် တည်ရှိပြီး ပေပေါင်း(၄၂၀၀)ကျော် အမြင့်ရှိသည့် ထင်ရှားသော ရေတံခွန်ဖြစ်သည် ရေတံခွန်သည် မူလ အဆင့်(၇)ဆင့် ရှိသည်။ အဝေးမှ နေ၍ အပေါ်ဆုံးအဆင့် (၃)ဆင့်ကို မြင်နေရပြီး ရေအများဆုံးအခန်းတွင် ရေစီးလုံးပတ်ပေ(၃၀)မှ ပေ(၄၀)အထိရှိသည်။
မတူပီမြို့မှ ဖနိုင်းအထိ(၅)မိုင်၊ ဖနိုင်းမှ ထီစောင်းအထိ(၁၁)မိုင်ခန့် အတက်အဆင်းဖြစ်သည်။ ဖနိုင်းမှ (၈)မိုင်ဆင်းပြီးနောက် ဘုံတလာချောင်းကို (၂)ကြိမ် ဖြတ်ရပြီးနောက် တောင်ကြားမြေပြန့်ကိုရောက်သည်။ ချောင်းဖြတ်(၂)ခုကြား၌ ဘုံတလာရေးအားလျှပ်စစ်စက်ရုံရှိသည်။ ဒုတိယချောင်းကို ဖြတ်ပြီးနောက် (၃)မိုင်ခန့် ဘက်ရပါက ထီစောင်းရွာသို့ရောက်သည်။ ထီစောင်းနှင့် ဘုံတလာမှာ (၃)မိုင်ခန့်ဝေးသည်။ ထီစောင်းမှ (၁)မိုင်ကျော်ခန့် ကားသွားနိုင်ပြီး ထိုမှတဆင့် တစ်မိုင်ခန့်လမ်းအတိုင်း ခြေလျင်သွားရသည်။
ဘုံတလာဆိုသည်မှာ ဒေသခံမတူပီမြို့တို့က (Bungtla)ဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။ ဘုံဆိုသည်မှာလဲသည်၊ တလာဆိုသည်မှာ ကျသည်ဟု အနက်ရသည်။ လဲကျသည်၊ ထိုးဆင်းသည်ဟု အနက်ရသည်။ ဘုံတလာ ရေတံခွန် အနီးဝန်းကျင်ရှိ ထီစောင်းကျေးရွာတွင် မတူမျိုးနွယ်စုများနေထိုင်ကြသည်။
Read more about the waterfall here:
Kanpetlet, Chin State, Myanmar
Sui Tin Fom
Sarah A Sochai
3073 W Ruskin Ct Apt2Milwaukee WI 53215-4202, USA
8222 Gault Ln Apt 801 San Antonio TX 78209-1934, USA
3709 Pleasant Lake Dr Indianapolis IN 46227-6929, USA
8156 W Muriel Pl Milwaukee WI 53218-3540, USA
Peter Vanduh Ceu
7727 Sharewood Dr Jessup MD 20794-3220, USA
Fyrrevænget 14, 6818 Årre, Danmark
Platanvej 2B, 1. tv, 6700 Esbjerg, Danmark
7621 Greighton Ct Apt A Indianapolis IN 46227-5575, USA
Kentucky Chin Christian Church- USA
Pau Khan Mung
E 203, 90 Waverly Dr.Frederick, MD 2172, USA